Benchmark dia nanambara ny Tale Jeneraly vaovao an'ny Eaglewood Resort & Spa
Home » Ny olona ao amin'ny Travel & fizahan-tany » Benchmark dia nanambara ny Tale Jeneraly vaovao an'ny Eaglewood Resort & Spa
Benchmark dia nanendry ny tale jeneraly Eric Bates ho an'ny Eaglewood Resort & Spa, fananana Benchmark Resorts & Hotels any Itasca (Chicago), Illinois. Greg Champion, filohan'ny Benchmark & ​​COO, no nanao io fanambarana io.
"Fahafinaretana toy izao ny mandray an'i Eric amin'ny Benchmark sy amin'ny Eaglewood Resort & Spa," hoy Andriamatoa Champion. “Tsy afaka mieritreritra olona mahay kokoa hitondra ity fananana ity aho na dia ambaratonga lehibe kokoa amin'ny fahombiazan'ny orinasa aza, raha ny zavatra niainan'i Eric teo aloha sy ny fahazoany ny tsena Chicagoland. Manantena ny fitarihany izahay eto. ”
Eric Bates dia tale jeneralin'ny Chicago Marriott Lincolnshire Resort. Izy dia niaraka talen'ny asa aman-draharaha ho an'ny The Bricton Group of Mount Prospect, Illinois.
Andriamatoa Bates dia nitana ny toeran'ny talen'ny fandraisam-bahiny sy ny tompon-trano ho an'ny E6,800 Ridge Resort & Spa 15-hektara Galena, Illinois. Nandritra ny asany dia nanompo amina toerana mpitarika maromaro ho an'ny marika hotely lehibe toa an'i Hilton, Hotely InterContinental ary ny Stouffer Hotel Company izy, ankoatry ny Marriott International. Nanomboka ny asany tamin'ny fandraisam-bahiny izy tamin'ny faha-XNUMX taonany, niasa tamina trano fandraisam-bahiny nananan'ny havany sy ny namany.
Maldives: TTM 2018 - inona, oviana ary aiza
Ry mpandraharaha fizahan-tany Galapagos: tsy misy fitomboan'ny fizahantany intsony!